Dharka Wararka iyo Sheekooyinka by Alietc.com - Alietc.com
Sida loo Doorto Bixiyeyaasha Dharka Menaese ee Ugu Fiican
Xulista alaab-qeybiyeyaasha ugu fiican alaab-qeybiyeyaasha ayaa lagama maarmaan u ah haween kasta oo raba inay ku raaxaystaan ​​raaxada ka adeegashada magaaladeeda cusub. Haweenkani waxay booqdaan magaalooyinkan si ay u shaqeeyaan, u xaadiraan dugsiga, u aadaan fasax, ama si fudud ula kulmaan oo ula falgalaan dadka kale. Waa sababahan awgood inay lagama maarmaan tahay in […]Read More
Waxaa laga yaabaa 29, 2020 0 comments
Alaab-qeybiyeyaasha ugu sarreeya Dharka Wiilka waxay bixiyaan Online-ka Lacag Weyn
Alaab-qeybiyeyaasha Dharka Wiilka waxay bixiyaan Qiimaha ugu Wanaagsan ee Shaatiyada, Saraawiisha, iyo Dhididka. Waxaa jira alaab-qeybiyeyaal badan oo khadka tooska ah ka kala dooranaya mararka qaarkoodna waxay noqon kartaa jahwareer in la ogaado halka laga bilaabayo wax-iibsiga. Waa kuwan talooyin waaweyn oo kaa caawin doona inaad hesho heshiisyada ugu fiican ee wax walba laga bilaabo shaatiyada ilaa dhididka. Marka hore, […]Read More